Sida loo soo dejiyo oo loo rakibo Windows 11, talaabo talaabo | Wararka Windows
Sida loo soo dejiyo oo loo rakibo Windows 11
Qolka Ignatius | | Windows 11
Microsoft ayaa hadda bilaabay Windows 11 qaybteeda ugu dambeysa, sidaa darteed isticmaale kasta ayaa mar hore ku rakibi kara kombiyuutarkooda, ha ahaado mid si rasmi ah u waafaqsan iyo haddii kale, taas oo aan kaga hadli doonno qormadan dambe oo aan sidoo kale ku tusno sida loo soo dejiyo oo loo rakibo Windows 11.
Cusboonaysiinta ugu weyn ee aan ka helno Windows 11 waa beddelka naqshadeynta, Qaab -dhismeed u raraaya alaabta ku taal sanduuqa hawsha xarunta oo ka saarta sanduuqa raadinta. Arrin kale oo muhiim ah oo ah Windows 11 waa soo noqoshada widget -yada, oo aan horay u aragnay horudhac ugu dambeeyay Windows 10 cusboonaysiinta.
1 Shuruudaha Windows 11
2 Liisanka Windows 11
3 Sida loo soo dejiyo Windows 11
3.1 Saaxir Windows 11
3.2 Abuur Windows 11 Media Rakibaadda
3.3 Soo dejiso Windows 11 Disc Image (ISO)
4 Sida loo rakibo Windows 11 laga bilaabo Windows 10
5 Kombiyuutarkaygu kuma habboona Windows 11
5.1 Waxaa mudan in la rakibo Windows 11 iyada oo aan la cusbooneysiin ama la joogin Windows 10 iyada oo la cusbooneysiinayo
Intii lagu guda jiray soo bandhigiddii rasmiga ahayd ee Windows 11, Microsoft waxay ku dhawaaqday in kombiyuutarrada kaliya ee leh processor 8th Gen Intel Core ama ka sareeya, AMD Ryzen 2 ama ka sareeya iyo Taxanaha Qualcomm 7 ama ka sareeya ayaa la jaanqaadi doona nuqulkan cusub.
Dhowr maalmood ka hor inta aan la siidayn nuqulkii ugu dambeeyay, shirkadda ayaa ku dhawaaqday taas ka saaray shardigaas iyo in dhammaan isticmaaleyaasha lahaa rasmiga ah Windows 10 liisanka ay u kicin karaan Windows 11 dhibaato la'aan.
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay in haddii kumbuyuutarku uusan buuxin mid ka mid ah shuruudaha ugu yar, kombiyuutarku wuu awoodaa Dhibaatooyinka iswaafajinta ee hadda jira iyo sidoo kale ma heli doonaan cusboonaysiin.
Halkan waxaan ku tusaynaa shuruudaha ugu yar ee lagama maarmaanka u ah in la rakibo Windows 11 kooxdaada.
Processor: Processor-ka oo leh 2 ama ka badan 64-bit cores 1 GHz ama ka sareeya.
Xusuusta RAM: 4 GB
Kaydinta: Si loo rakibo Windows 11 waxaa lagama maarmaan ah in kombiyuutarka lagu haysto 64 GB oo kayd ah ama ka badan.
firmware: Waa inuu taageeraa habka kabaha nabdoon
Kaarka sawirrada: La jaan qaadaya DirectX 12 ama WDDM 2.0 darawal.
TPM: Module -ka Platform -ka la Aaminsan yahay 2.0
Screen: Xalka ugu yar ee loo baahan yahay waa 720p in ka badan 9 inji oo leh kanaalka 8-bit midab kasta.
kuwa kale: Waxaad u baahan tahay xiriir internet iyo koonto Microsoft si aad u dhaqaajiso nooca Windows 11.
Haddii aynaan aad u cadayn kuwaas oo ka kooban kooxdayada, waxaan adeegsan karnaa dalabka ay Microsoft noo diyaarisay hubi haddii qalabkayagu ku habboon yahay Windows 11 iyo in kale.
Liisanka Windows 11
Haddii kombiyuutarkaaga uu hadda maamulo ruqsad rasmi ah Windows 10, isla lambarka taxanaha ah ee aad u isticmaasho kombiyuutarkaaga si aad u shaqeyso, Waa ansax in la dhaqaajiyo nooca cusub ee Windows 11.
Haddii aadan haysan lambarka liisanka oo ku habboon, waxaad qaadi kartaa tillaabooyinka soo socda si aad u ogaato oo aad u hagto inta lagu guda jiro hawsha rakibidda, haddii aadan lahayn fikrad xun inaad si toos ah u cusbooneysiiso Windows 10.
Waxaan ku furaynaa shaashadda terminal iyada oo loo marayo amarka CMD ee aan ku qori doonno sanduuqa raadinta
Marka xigta waxaan qornaa WMIC Path SoftwareLicensingService Hel OA3xOriginalProductKey khadka taliska.
Haddii habkani shaqeyn waayo, mar walba ma shaqeeyo, waan awoodnaa adeegso barnaamijka ShowkeyPlus, codsi aan si bilaash ah uga soo dejisan karno xidhiidhkan.
Waxaana leeyahay waa fikrad xun waayo waxaad jiidi doontaa dhammaan dhibaatooyinka hawlgalka in kooxdaadu hadda dhibban tahay. Waxa ugu fiican ee aad samayn kartaa waa rakibid nadiif ah adigoo hore u samaystay gurmad.
Sida loo soo dejiyo Windows 11
Habka kaliya ee rasmiga ah si kala soo bax Windows 11 Waa iyada oo loo marayo mareegaha Microsoft. Weligaa ha ka soo dejisan nooc ka mid ah daaqadaha bog aan ahayn Microsoft, maadaama aad naftaada ka heli karto yaabab aan fiicnayn.
Microsoft ayaa diyaar noo ah 3 hab oo kala duwan oo lagu soo dejisto Windows 11:
Saaxir Windows 11
Si aqoon kumbuyuutar oo badan ma lihid oo aadan rabin inaad noloshaada ku adkeyso rakibidda, waa inaan doorannaa ikhtiyaarkan.
Wizard Rakibaadda Windows 11 wuxuu noo oggolaanayaa inaan soo dejisanno noocaan cusub ee Windows iyo ku rakib dusha koobigaaga Windows 10 in aan ku rakibnay kombiyuutarka.
Sidan, dhammaan xogta aan hadda ku hayno kombiyuutarka waa la ilaalin doonaa waxayna heli doonaan marka rakibidda Windows 11 dhammaato.
Haddii fikraddaadu meel marto samee rakib xoqan, ikhtiyaarkan maahan waxaad raadineyso.
Abuur Windows 11 Media Rakibaadda
Doorashadan ayaa noo ogolaaneysa soo dejiso nuqul ka mid ah Windows 11 oo samee warbaahin rakiba si loo rakiboAma USB stick ama DVD drive.
Markaan abuurnno taageerada lagama maarmaanka u ah cusboonaysiinta, waa inaan dib u bilownaa kombiyuutarka oo aan galnaa BIOS si markaa kombiyuutarku wuxuu kabaha ka saaraa meesha aan ku haysanno nuqulka Windows 11 diyaar u ah inaan rakibno.
Haddii aad rabto samee rakib nadiif ah Windows 11, ikhtiyaarkani waa mid qumman.
Soo dejiso Windows 11 Disc Image (ISO)
Haddii aad rabto waa soo dejiso Windows 11 ISO, ISO oo aad hadhow nuqul ka samayn karto waddo dibadeed si aad ugu rakibto kombiyuutarkaaga, tani waa ikhtiyaarka aad u baahan tahay.
Markaan furno sawirka ISO ee wadista halka aan dooneyno inaan ku rakibno Windows 11, waa inaan dib u bilaw kombiyuutarkaaga oo isticmaal wadistaas si aad u bilowdo markii ugu horeysay kooxda.
Sida loo rakibo Windows 11 laga bilaabo Windows 10
Hab kale oo aan haysanno si aan ugu rakibno Windows 11 kombiyuutar cusub waa iyada oo loo marayo cusbooneysiinta Windows.
Haddii kombiyuutarkaagu ku habboon yahay Windows 11, qaybta Cusbooneysiin Windows, oo ku yaal ikhtiyaarrada qaabeynta Windows (Xakamaynta + i) farriin ayaa la soo bandhigi doonaa oo nagu martiqaadaysa inaan soo dejisanno oo aan rakibno Windows 11.
Waa inaan kaliya raac talaabooyinka shaashadda ka muuqda oo sug inta ay kooxdu dhammaynayso. Dhammaan xogta aan ku kaydinay kombiyuutarka waa la ilaalin doonaa, si kastaba ha ahaatee, marna ma xumaato in la sameeyo gurmad haddii ay dhacdo in geedi socodku fashilmo inta la rakibayo.
Kombiyuutarkaygu kuma habboona Windows 11
Adduunyadu ma dhammaanayso maxaa yeelay kumbiyuutarkaagu uma kici karo Windows 11, sida Microsoft ku dhawaaqday Windows 10 waxay sii wadi doontaa taageerada rasmiga ah ilaa 2015, sidaa darteed weli waxaa jira 4 sano oo la beddelo qalabka ka hor inta aysan joojin helitaanka wararka amniga.
Waxaa mudan in la rakibo Windows 11 iyada oo aan la cusbooneysiin ama la joogin Windows 10 iyada oo la cusbooneysiinayo
Su'aashu iyada ayaa isweydiinaysa. Daaqadaha waa nidaamka hawlgalka desktop -ka adduunka oo dhan laga isticmaalo, sidaa darteed saaxiibbada kuwa kale waxay u shaqeeyaan sidii ay ugu abuuri lahaayeen softiweer xaasidnimo ah nidaamkan hawlgalka, uma aha macOS ama Linux, oo saamigooda suuqa uu ka yar yahay 10%.
Bulshada teknolojiyadda aan ku nool nahay, cusboonaysiinta amniga ayaa lagama maarmaan u ah cunista. Ku raaxaysiga cusboonaysiinta amniga waxay u tahay khatar aad u muhiim u ah nabadgelyadeena iyo tan kooxdayada oo ay tahay inaanan qaadan.
Antivirus nagama ilaaliyaan baylahda nidaamka, dayacanka ay jabsadayaashu u adeegsadaan inay ku helaan qalabkeenna. Ka -faa'iideysiga nuglaanta nidaamyada hawlgalka ayaa aad uga faa'iido badan ugana waxtar badan adeegsiga codsiyada si loo qaybiyo dhammaan noocyada furin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Windows » Nidaamyada hawlgalka » Windows 11 » Sida loo soo dejiyo oo loo rakibo Windows 11
Horumarinta Xalka Software oo leh Horizon Oasis